mairie-antananarivo – CUA: Fanadiovana faobe teny Andavamamba- Anosipatrana
CUA: Fanadiovana faobe teny Andavamamba- Anosipatrana
administrateur 31 may 2018 Commentaires fermés
Noho ny fangatahan’ny mponina eny Andavamamba, Ilanivato, Anosipatrana iny, nanao fandaminana sy fanadiovana faobe teny an-toerana androany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Nalamina tamin’izany ireo mpivarotra amoron-dalana mivarotra amin’izany lalana izany, nosokafana sy nodiovina ny dale na ny tatatra ka nosokirina ireo fako manentsina ireo tatatra sy mahatonga ny lalana amin’iny faritra iny ho feno rano matetika, nesorina ny bozoka amin’ny toerana misy izany, nofafana ny lalana, nesorina ny fasika amin’izany lalana izany, namboarina ihany koa ny lalana rarivato mikorontana sy simba,…
Nanatanteraka ny asa tamin’izany ny mpiasan’ny CUA foibe sy ny avy amin’ny Boriboritany 6, ny ekipa teknika ao amin’ny fiadidiana ny tanàna, ny mpamonjy voina, nisy ihany koa ireo mponina manodidina iny Fokontany Andavamamba, Ilanivato ary Anosipatrana ao amin’ny Boriboritany faha-4 iny, nanampy tamin’ny fanatontosana izao fandaminana sy fanadiovana faobe izao.
Mbola hitohy rahampitso ny asa, ary hiitatra any amin’ireo Boriboritany 5 hafa eto an-drenivohitra. Nandritra izany, nanentana ny mponina koa ny Kaominina hitandro sy hanaja hatrany ny fahadiovana satria mandrora mitsilany ihany ny fanariana fako any anaty tatatra sy dale, ny fahadiovan’ny tanàna hoy ihany ny fiadidiana ny tanàna dia tombontsoa lehibe ho an’ny mponina.
Amin’izao voalohany izao dia manentana sy mampianatra ny olona ny fahadiovana ny CUA, atsy ho atsy, hisy ny sazy ho an’ireo mbola minia tsy mitandro izay fahadiovana sy fandaminana ny tanàna izay. Ankoatra izany, amin’ny hankalazantsika ny fetim-pirenena tsy ho ela, hiaina anaty fahadiovana ny mponin’Antananarivo mialoha, sy mandritra ary ao aorian’io fetim-pirenena io.